पाचँ सयले घट्यो सुनको मुल्य : पुग्यो तोलाको यती…. « गोर्खाली खबर डटकम
पाचँ सयले घट्यो सुनको मुल्य : पुग्यो तोलाको यती….
आज साताको अन्तिम दिन शुक्रबार सुनको मुल्यमा गिरावट आएको छ । ९१ हजार १ सयमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको सुनको मुल्यमा आज एकै दिन पाचँ सयले घटेर छापावाला सुन प्रतितोला ९० हजार ६ सयमा कारोबार भइरहेको जनाइएको छ ।
त्यस्तै , तेजाबी सुनको मूल्य ९० हजार १ सय ६० रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले बताएको छ।
भने चाँदी बिहीबारको तुलनामा ५ रुपिँयाले बढेर प्रतितोला ९ सय ४० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।